Ithimba Elimhlophe Elimhlophe
Itiye elimhlophe lidumile kakhulu futhi lidumile phakathi kwabathandi balesi siphuzo. Futhi akuyona nje ukunambitheka okubucayi nokuqukethwe okuphezulu okungenzeka kwamakhakheni. Isici esiyinhloko seti elimhlophe yinzuzo engenakuphikwa enkambeni yokulahlekelwa isisindo. I-tea yalolu hlobo inomphumela omuhle kuwo wonke umzimba, kufaka phakathi nezinqubo ezibaluleke kakhulu ekulwa nokunciphisa ngokweqile, futhi lokhu kuyindleko yokwandisa kwamandla, ukubamba iqhaza kwinqubo ye-thermogenesis, ukulinganisela kokulinganisela kwamanzi, nokunciphisa amathuba okubunjwa kwamaseli amasha.
Isikhathi sokuvuna itiye elimhlophe kusekuqaleni kwentwasahlobo. Ukwakhiwa, amaqabunga namaqabunga amancane esitshalo iKamellia Sinensis, enomusa omuhle kancane, afakiwe. Lesi sitshalo sesilinywa iminyaka eminingi ensimini yaseChina naseNdiya. Inani elikhulu lama-antioxidants ekwakheni itiye elimhlophe libangelwa ukwelashwa okuncane okushisa. Phela, lolu hlobo lwezokwelapha lufaka ekulahlekelweni kwemithi ebaluleke kakhulu equkethe itiye - catechin. Amaqabunga aphelele aseCamellia Sinensis asetshenziselwa ukukhiqizwa kwezinhlobo zama-black and green tea.
Izinto zetiyi ezimhlophe: i-caffeine namakhakheni
Izincomo kanye nezinkomba zokusebenzisa itiye elimhlophe ekulwa nesisindo kuncike ekutheni liqukethe inani elincane le-cafein (kuqhathaniswa netiye elihlaza, elimnyama noma elibomvu), futhi ngokuphambene, inani elikhulu lama-catechin e-polyphenol asisiza ukushisa amafutha, okwenza inqubo ye-thermogenesis. Yilezi zakhiwo zetiya elimhlophe elivumela abalobi be-"International Journal of Obesity" ukuba batusa lokhu okuphuzwayo njengengxenye ebalulekile ekwenzeni ukunciphisa umzimba.
Uma ukholelwa idatha yephephabhuku elithi "ukudla okunomsoco kanye nesimetabolism", i-methylxanthine, eyingxenye yeti elimhlophe, ikhuthaza ukuwohloka kwamafutha futhi yandisa ukusetshenziswa kwemali komzimba. Ngokuphathelene ne-polyphenols, indima enkulu idlala yi-epigallocatechin-3-gallate. Lesi sici sisiza ukunciphisa izinga lokubunjwa kwamaseli amafutha amasha ngokuvimbela ukubamba iqhaza kwe-triglycerides. Amanye amagama, izinto ezisebenzayo ezenza itiye elimhlophe, kunciphisa kakhulu inqubo yokwakheka nokufakwa kwamasheya, kunciphise umzimba.
Indima yetiyi elimhlophe le-vdiete
Ukunamathela ngokuqinile ekudleni kuyilingo elibucayi kakhulu, okumbalwa abangakwazi ukumelana nalo. Kuphathelene nokunciphisa izakhi kanye nendlela yokwandisa ukudla kwakho. Umphumela - wonke umphumela wokudla uzokuya ku "cha." Ikhefu letiyi elimhlophe ngesikhathi sokudla ngalunye kuzosiza ukunciphisa ukudla nokulamba, ukunciphisa ukuthanda amaswidi, nokusiza ukuqapha ubukhulu bezingxenye zokudla. Ngokufana netiyi elimhlophe, kunconywa ukuthi usebenzise izinongo kanye nokusihlwa, isenzo saso esibhekiswe ekuxhumaneni nesisindo esiningi.
Umsizi omkhulu onenzuzo yesisindo
Ngonyaka ka-2009, i- "American Journal of Clinical Nutrition" yanyathelisa indaba eveze imiphumela emihle yokuhlolwa esebenzisa itiye elimhlophe. Umlobi we-athikili, udokotela waseMelika uKevinMaki, wathi kukhona ubudlelwano obuqondile phakathi kwama-catechins okuhlushwa kanye nenqubo yokulahlekelwa isisindo.
Ukuhlolwa kwabantu abathintekayo ekudleni okuphansi kwekhalori badla itiye eluhlaza nelomnyama. Ekupheleni kwamasonto ayishumi, kwavela ukuthi iqembu lamadoda abaphuza itiye eliluhlaza lalahlekelwa amakhilogremu amabili ngaphezu kwesinye. Okuqukethwe kwamakatekini etiyi eliluhlaza kwakuyi-660 mg, futhi ku-black - 22 mg. Ukulahlekelwa kwesisindo samasonto onke kwaba ngu-0.25 kg.
Itiye elimhlophe kanye nezinto zalo eziwusizo
AmaCatechins aqukethwe itiye, akhuthaza ukuqiniswa kokuzivikela, aphazamise izinguquko nokuguga. Omunye wabachwepheshe be-Oncology Institute, eWashington, DC, u-Demeter Whitmorch ufunde ukuthi ama-white tea polyphenols ama-cholesterol aphansi, ahlaziye igazi futhi avikela umzimba wesilisa kusuka kumdlavuza wesi-prostate.
Ngo-2004, abasebenzi baseManhattan University bathi isitatimende sokuthi itiye elimhlophe linemiphumela yokulwa namagciwane kanye ne-antibacterial.
Indlela yokwenza itiye elimhlophe ngendlela efanele
Inqubo yokwenza itiye elimhlophe idinga imithetho ekhethekile. Omunye wabo uhanjiswe ekushiseni kwamanzi, okugcwele i-welding. Akufanele kudlule i-800 C. Uma kungenakwenzeka ukukala izinga lokushisa nge-thermometer, bese kuthi emva kokubilisa kufanele kuvunyelwe ukupholisa kancane, futhi lokhu kungama-5-10 amaminithi.
Abesifazane abakhulelwe kufanele baqaphele kakhulu ekudleni. I-whiskey emhlophe ingenye yeziphuzo eziphephile, ngoba inombolo evumelekile ye-caffeine kwabesifazane abakhulelwe ayikho ngaphezu kuka-100 mg ngosuku. Ukwamukelwa kwe-caffeine ngamanani amakhulu, ngokusho kweBrithani Medical Journal, kunomthelela ekulahlekeni kwesisindo esibalulekile ekusaneni.
Iziphuzo ezinomphumela okhuthazayo ziphikisana nabantu abanenkinga yokukhathazeka, kanye nokugula kwezifo zezinso. Umphumela we-caffeine uboniswa ngeso lengqondo, ukukhathazeka okwanda, ukukhubazeka, ikhanda kanye nezinkinga zenhliziyo. Itiye elimhlophe liqukethe inani elincane lezinto ezilimazayo.
Akunconywa ukuxuba itiye elimhlophe nezinye iziphuzo futhi uzolahlekelwa ukunambitheka kanye nephunga elimnandi. Ngaphezu kwalokho, kuzolahlekelwa izinto eziningi eziwusizo. Kumele kuqashelwe ukuthi itiye, elidayiswa ngamabhodlela epulasitiki, selilahlekelwe ama-catechines angu-90% futhi akuyona isiphuzo esiwusizo nesinconywayo.
Ungadla kanjani ilungelo lokuma
Izakhiwo eziwusizo zobisi lwezimbuzi
Iklabishi elisondayo yokulahlekelwa isisindo
Iqiniso lonke mayelana ne-soy: bazuze futhi balimale
Izakhiwo eziwusizo zokusanhlamvu: ibhali, ama-oats, ummbila, isilwane, ilayisi, i-buckwheat
Ungathatha kanjani ama-amino acids ngendlela efanele
Inyama yesinkwa: inzuzo nokulimala
Ukuhamba kwehlobo: culottes - umkhuba-2016
Isaladi nge-chinanini ekheniwe
Imibono yobuciko: yini okufanele uyenze kumamagazini omdala?
I-ex-bride yaseBaskov ingashada maduzane
Ukukhipha isisu sokukhulelwa kokukhulelwa
Ukunakekelwa kwe-Reynaud's syndrome ngamakhambi omuntu
Izitshalo ezingaphandle: i-palm cariota
Ungakhohlwa kanjani isoka langaphambili?
UDmitry Nagiyev washiya ozakwabo ngaphandle kokudla, ividiyo
Umehluko phakathi kwabafana namantombazane
Ingane encane kanye nama-lens wokuxhumana
Indlela yokuthuthukisa isimo sengqondo eqenjini
Shish kebab kusuka inkukhu nge sausages